Shiinaha Dibedda Iskudarka Isku-xirayaasha WPC Soosaarayaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Lihua
Lahaanshaha Alaabada:WPC Cladding
Qiimo:$ 3.84 / M
Midabka:Shukulaatada, Grey, Casaan bunni ah, bunni ama la habeeyay
Barkadda Dabaasha, beerta bannaanka
Buraash ama Sanding
● Co-extrusion, tiknoolajiyada ugu dambeysa ee kaladuwan alwaaxda, tiknoolajiyaddan casriga ah ee horumarsan ayaa si wadajir ah loo soo saaray, aasaaska dusha sare leh ayaa ah waxa siinaya guddi kasta waxqabad gaar ah oo ka sarreeya. , dusha sare kumuu sii fidi doono isla markaana qandaraas la geli doono sida iskudhafyada kale, halka dhanka kale kuleylka hoose ee dhuuqitaankiisu macnaheedu yahay cagaha qaawan ayaa jeclaan doona, oo lagu daray xasilloonida sare ee UV midabkeeda dabiiciga ah ayaa socon doonta sannado.
Panel Lihua's co-extruded wall panel wuxuu gaaraa dhameystir midab aan dhamaad laheyn oo dhab ah, isbarbar dhiga kaliya alwaax dabiici ah, tikniyoolajiyadan casriga ah iyo tan casriga ah waxay u ogolaaneysaa isku dhafka midabka cajiibka ah, oo siinaya mid ka mid ah waxyaabaha isku dhafan ee ugu fiican!
Macno malahan midabka caadiga ah ama midabka isku dhafka ah, waxaan sameyn karnaa sida go'aankaaga ah.Haddii aad midab gaar ah uhesho darbiyada, fadlan noo soo dir samballadaada
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.1 Muunadaha midkoodna ma muujin karo guuldarro Ma jiro wax dillaac ah oo ka mid ah tijaabooyinka tijaabada ah
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.2 Leexashada hoosta xamuul ah 500N ≤5.0mm Xoog Laabasho
Xamuulka ugu badan ee jabka Wajiga hore: Xamuulka ugu badan: Micnaha 1906N
Leexashada at 250N: Micnaheedu yahay 0.64mm
Bararka ugu badan: ≤12% dhumucdiis, ≤2% ballaciisa, length1.2% dherer
Macnaheedu: ≤8%, Max: ≤10% Barar Baad ah: 2.25% dhumucdiis, 0.38% ballaciis, dhererkeedu yahay 0.15%
Ku jiid adkaysi EN 15534-1: 2014 Qaybta7.7
EN 15534-5: 2014 Qaybta 4.5.6 Xoog ku fashilmay: 479N,
Qiimaha celceliska: 479N,
Hore: Eco-friendly Wood Composite Co-extrusion WPC Decking
Xiga: Dhirta biyuhu ka kooban yahay alwaax WPC ubaxa dheriga Beerta Beerta
darbiga hagaha gogosha hage soo dejinta
Q1: Shahaadooyin noocee ah ayaad ku gudubtay?
Q2: Shahaadooyin noocee ah ayaad ku gudubtay?
Q3: Macaamiilkee ayaad ku dhaaftay kormeerka warshadda?
Q4: Muxuu yahay nidaamka wax iibsigaagu?
S5: Waa maxay heerka alaab-qeybiyeyaasha shirkaddaadu?
S6: Mudo intee le'eg ayaa caaryadaadu si caadi ah u shaqeysaa? Sidee loo ilaaliyaa maalin kasta? Maxay tahay awoodda nooc kasta oo dhimanaya?
S7: Waa maxay habka wax soo saarkaagu?
Q8: Mudo intee le'eg ayay tahay waqtiga dhalmada ee caadiga ah ee alaabtaadu?
S9: Ma haysaa tirada ugu yar ee dalab ah? Hadday sidaas tahay, waa maxay tirada ugu yar ee dalabku?
S10: Waa maxay awoodaada guud?
Bannaanka WPC derbiga duubista
Co-extrusion biyuhu WPC Wall Cladding
Dharka WPC ee dibedda
WPC derbiga wada-extrusion derbiga
WPC Wall Panel Dibedda
Wood biyuhu darka caaga Co-extruded W ...
alwaax decking isku dhafan, Gogosha WPC, Qurxinta WPC, Qurxinta banaanka ee WPC, Bannaanka WPC decking, Dabaqa WPC,